FAQ | Heart Galaxy Culture (Beijing) Co., Ltd.
Fa maninona no mampiasa vola amin'ny sarimihetsika sinoa ary inona no tombony azon'ny mpampiasa vola vahiny?
Ny horonantsary rehetra voatanisa ao amin'ny tranokalanay dia navoaka indrindra tao amin'ny tanibe Shina. Satria ny sarimihetsika tianay dia voafantina ihany koa arakaraka ny tsenan'ny tsena sinoa, mifanaraka amin'ny tsenan'ny sarimihetsika anatiny, paositra ary ny tsiron'ny besinimaro.
Ao amin'ny vanim-potoanan'ny fampandrosoana haingana ny tsena sinoa sinoa.
Antony efatra no mahatonga ny boxe boxe film Sina hitombo isan-taona.
(1) Vahoaka marobe ao Shina.
(2) Ny fitomboana haingana amin'ny fidiram-bolan'ny olona dia mora kokoa ny mahita sarimihetsika amin'ny sinema toy ny sakafo atoandro.
(3) Ny fanjakana dia manohana mafy ny politika momba ny indostrian'ny sarimihetsika.
(4) Eo ambanin'ny toe-javatra mafy mahazo ny COVID-19 manerantany, tokana ny tsena sinoa ary efa tafarina amin'ny tsena teo aloha. Mitombo hatrany ny paositry ny boaty.
Jereo ny angona ambany, afaka mahita efitrano fampandrosoana lehibe ho an'ny biraon'ny sarimihetsika sinoa isika.
(Tsy miraharaha 2020 noho ny COVID-19, fa amin'ity taona ity dia naverina amin'ny laoniny ny tsena)
Raiso ho ohatra ny sarimihetsika navoaka iray, raha mampiasa 100.000 YUAN aho, ohatrinona ny tombony azoko farany?
Amin'ny ankapobeny, ho an'ny boaty misy ny sarimihetsika dia misy 35% ka hatramin'ny 39% sisa ho an'ny mpamokatra, afa-tsy ny fizarana sinema sy ny sarany hafa, ny mpampiasa vola dia afaka mahazo ny vola miditra mifanaraka amin'ny habetsaky ny fampiasam-bola.
Ohatra, HI, Neny, ilay sarimihetsika nivoaka tamin'ny 12 feb, Fetiben'ny lohataona tamin'ity taona ity. Ny vidin'ny famokarana dia 200 tapitrisa, ny biraon'ny famaranana dia 5,41 miliara, raha mampiasa 100 000 RMB ianao dia afaka mahazo 947.100 farafaharatsiny.
Sarimihetsika HI, Neny
Fampiasam-bola (RMB) Vola miditra (RMB)
100k ￥ 947,100
300k 8 2,841,300
1000k , 9.471,000
Ahoana no ahalalako ny nomeraon'ny boaty farany ary avy aiza no ahazoako ireo isa?
Misy iray amin'ireo fampiharana fanavaozana ny data amin'ny fotoana tena manan-kery indrindra ho an'ny boaty filma, antsoina hoe ManYan Movie, www.maoyan.com, koa dia afaka misintona fampiharana amin'ny finday. Avy eo ianao dia afaka mahita ny boaty tena misy ny sarimihetsika rehetra.